भाग्यमानीले मात्र देख्ने यो सुन रङ्गको नाग जसले तपाइको भाग्य चम्काउछ ! नाग देखेको ३ सेकेन्डमै कमेन्टमा ॐ लेखी सेयर गर्नुहोला ! - Nepali Taja Khabar
मुख्य पृष्ठ /रोचक/भाग्यमानीले मात्र देख्ने यो सुन रङ्गको नाग जसले तपाइको भाग्य चम्काउछ ! नाग देखेको ३ सेकेन्डमै कमेन्टमा ॐ लेखी सेयर गर्नुहोला !
भाग्यमानीले मात्र देख्ने यो सुन रङ्गको नाग जसले तपाइको भाग्य चम्काउछ ! नाग देखेको ३ सेकेन्डमै कमेन्टमा ॐ लेखी सेयर गर्नुहोला !
प्रकृतिपूजा र उपासनाको परम्परामा हिन्दूहरुले मनाउँने नागपञ्चमीले पर्यावरणीय महत्वलाई झल्काउँछ नै,अर्कोतिर हिन्दू धर्मको दार्शनिक पक्षलाई सम्झाउँ छ । सिधा भाषामा भन्नु पर्दा नाग भनेको सर्प हो । सर्पले प्रकृतिमा भएको विषाक्त तत्वहरुलाई आफूमा ग्रहण गरेर प्राकृतिक सन्तुलनलाई कायम राख्दछ
प्रजातीय शास्त्रले नाग जातीलाई मंगोल मूल आदिबासी हुन भनि व्याख्या गर्दछ । सिन्धु नदी पार गरेर आएका आर्यहरु अर्थात हिन्दूहरुले याहाँको आदिवासीका संस्कृति तथा तिनका परम्पराहरुमा आफूलाई समाहित गर्नु हिन्दूहरुको उच्चतम धार्मिक सहिष्णुता हो भन्ने प्रष्टिन्छ ।